Manodidina ny 70% amin'ny faritanin'i Korea Atsimo no misy tendrombohitra. Ny halavany dia miovaova amin'ny 200 ka hatramin'ny 1950 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Eo amin'ny vato dia misy valan-javaboaram-pirenena , tahirin-tany, tempoly fahiny ary pagoda , noho izany dia ankafizin'ny mponina sy ny mpizaha tany izy ireo.
Ny tendrombohitra any Korea dia antsoina hoe teny hoe "san", izay ampiana amin'ny anaran'ny vato tsirairay. Ny volkano avo indrindra dia volkano maty. Ny fipoahana farany niseho tany amin'ny Moyen Âge, saingy tsy nampisy fahasimbana goavana izy ireo.
Ny sisin-tendrombohitra lehibe indrindra dia mamakivaky ny morontsiraka atsinanan'ny firenena. Izy ireo dia malaza amin'ny hatsaran-tarehiny, zavamaniry sy biby tsy fahita firy. Any amin'ny faritra andrefan'i Korea, ireo vatolampy dia miorina amin'ny ala mikitroka ary rakotra ala mikitroka, ary misy tempoly maro any atsimo. Mazava ho azy fa amin'ny toerana rehetra dia misy lalana fizahantany azo antoka.
Ny mponina any an-tendrombohitra isan-kerinandro dia mifanena amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany, miala sasatra na misaintsaina. Raha tsy manana fahafahana hiala ao an-tanàna izy ireo, dia maharesy ny hevi-dehibe indrindra amin'ny faritra be mponina - misy tendrombohitra tahaka izany any Korea. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana, eo amin'ny 10 000 eo ho eo ny mponina dia mpiloka an-tserasera ary manodidina ny 6 tapitrisa ny mpankafy.
Tendrombohitra malaza any Korea Atsimo
Ao amin'ny firenena dia misy andian-jiolahy marobe izay afaka mitsidika azy ireo. Ny vato malaza indrindra dia:
Tendrombohitra Amisan dia ao amin'ny faritanin'i Chungcheon-Pukto any avaratra atsinanan'ny fanjakana. Ny haavony dia 630 metatra. Ilay renirano dia malaza amin'ny zaridaina tsara tarehy, izay mitombo ny voninkazo marefo, ary ny angano malaza momba ny fianakavian'ny giants, rehefa namono ny anabaviny aloha ilay rahalahy, ary avy eo, taorian'ny nahatsapana ny fahadisoany ary ny tenany.
Voraksan - ny tendrombohitra dia manana haavony miisa 1094 m, no tampon'ny pejin'ny Sobeksan ary mizara roa faritany: Kensan-Pukto sy Chungcheon-Pukto. Eo am-pandevenana dia misy monastera bodista fahiny sy zaridaina nasionaly.
Vanbansan dia miorina amin'ny faritanin'i Gyeonggi eo anelanelan'ny tanànan'i Tonducheon sy Phongcheon any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Repoblikan'i Korea. Ny haavon'ny tendrombohitra dia 737 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Avy any an-drenivohitra ianao dia afaka miditra ao anatin'ny 2 ora.
Chirisan dia iray amin'ireo tendrombohitra avo indrindra ao Korea Atsimo. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 323 metatra. Ny fisiana ara-daharampehintany ary ara- Misy tempoly 7 bodista, izay tsangambato ara-tsakafo.
Soraksan dia any amin'ny faritanin'i Gangwon-do, akaikin'ny tanànan'i Sokcho, ary anisan'ny havoana Taebeksan. Ny haavon'ilay tanàna amin'ny haavon-dranomasina dia 1708 metatra. Ity ny natiora, ny riandrano 2 Piren sy Yuktam, ny bodista bodista ary ny Hyndylbawi - vato malaza malaza, mijoro eo amin'ny vato hafa. Ny haben'izy ireo dia mihoatra ny 5 m.
Sobek - ity massif ity dia an'ny faritra atsimoandrefan'ny tendro atsinanana atsinanan'i Sina. Izy io dia heverina ho ny lavaka fantsakana ao amin'ny fanjakana. Ny haavony farany dia 1594 m, ary ny halavany dia 300 km. Eto dia mitombo ny ala mikitoantoana, ala mikitroka ary malazo. Tao anatin'io faritra io no nahitana volamena sy molybdenum.
Pkhalgonsan dia miorina eo amin'ny faritra atsimo-andrefan'i Korea ary miorina eo amin'ny sisin'ny tilikambo Taebaeksan. Ny vatolampy dia mahatratra 1193 m mahery. Eto dia ahitanao ireo fanatanjahantena ara-kolontsaina sy ara-tantara maro, ohatra, ireo tempoly fahiny tamin'ny vanim-potoan'i Sila: ny Grotto de 3 Buddhas sy Tonhvasa. Izy ireo dia tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo harena nasionaly ambanin'ny No. 109.
Muhaxan dia miorina amin'ny faritanin'i Gyeongsangnam-do, eo akaikin'i Pusan . Ny anaran'ny havoana dia adika hoe "tendrombohitra iray mandihy". Ity anarana ity dia nomena noho ny silhouette ny vatolampy iray mampahatsiahy ny vorona iray miomana amin'ny fiaramanidina. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 761 metatra. Misy lalao maoderina 2 ary 9,5 kilaometatra ny halavany.
Kerensan - dia ao amin'ny faritanin'i Chungcheon-Namdo eo amin'ny sisin'ny tanàna 3: Daejeon , Keren ary Gyeongju . Ny olona ao an-toerana dia mihevitra ny masina ho masina ary mino fa ny faritaniny dia feno satroka Qi. Any amin'ny faritra sasany dia misy toby miaramila, ary ny sisa dia tafiditra ao amin'ny valan-javaboary mitovy amin'io anarana io.
Tanànan- dehibe NC Ben'ny tanàna NC Firenena Flag of the United States.svg Etazonia Faritany Gajongsan ary dia tanàna ao amin'ny faritanin'i Gyeongsangnam, ao amin'ny departemantan'i Gyeongsangnam, ao amin'ny faritr'i Île-de-France , ao Frantsa. Ity ny Tempoly Bodista malaza any Heins , izay ahitana ny tahirin-tsarin'ireo rakitra tranainy momba ny "Tripitaka Koreana". Nosoratana ho takelaka hazo 80.000 izy ireo ary harena nasionaly ambany ambany faha-32.
Meraxan - dia any amin'ny faritanin'i Hwanghae-pukto eo amin'ny sisin'ny faritanin'i Phensang sy Rinsan. Ny haavon'ny vato dia 818 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Tao amin'ny faritry ny havoana tamin'ny 1959 dia nisy ny valan-javaboary iray niorina, ny faritra misy dia 3440 hektara. Mipetraka ny karazana peta-drindrina tsy fahita firy.
Hallasan no toerana avo indrindra ao Korea Atsimo, nahatratra ny marika tamin'ny 1950 m ny volkano. Ny volkano dia nambarana ho ny National Park ary tafiditra ao amin'ny lisitry ny Lovam-bokin'ny UNESCO. Anisan'ny lovan-tsofina voajanahary ao amin'ny firenena koa ny vatolampy ary maka toerana 182 izy.
Kumjonsan dia miorina ao amin'ny faritra avaratr'i Busan City, ao amin'ny distrikan'ny Pukku sy ny distrikan'ny tanànan'i Tongnagu. Ny tendrony ambony indrindra amin'ny tendrombohitra dia antsoina hoe Knodanbon ary eo amin'ny 801,5 m. Io no toetran'ny mpizahatany be mpitsidika indrindra ao an-tanàna. Misy fiara an-dalamby handefa mpandeha ho any amin'ny toeram-pisakafoanana any Sanson. Ao an-tanàna dia afaka mifankahalala amin'ny fiainan'ireo teratany sy ny fomba fiainany ianao.
Pukkhansan dia tendrombohitra misy faritra any amin'ny faritra avaratr'i Seoul ary manana haavo 836,5 m. Ambony avo ny tampony. Tamin'ny 1983, dia nisy tahirin-tsakafona iray ihany no nisokatra tao amin'io faritany io. Ny biby sy ny zavamaniry dia aseho amin'ny biby 1300 sy ny zavamaniry. Misy lalana mihoa-tsehatra mihoatra ny 100 izay mitondra mankany amin'ny tempoly bodista sy rindrina manda fahiny.
Dobansan - ilay tendrombohitra dia miorina ao amin'ny faritanin'i Kengi-do eo amin'ny sisin'ny tanàna 3: Seoul, Uyeongbu ary Yangtze. Ny haavony farany indrindra dia 739,5 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ity massif ity dia malaza amin'ny fanorenana vatosoa (ohatra Yubong, Seoninbong ary Manjangbon), ny tampon'I Uyam sy ny lohasaha malaza (Songchu, Donong, Eongeoheion, sns.). Maherin'ny 40 ny lalana fizahan-tany no napetraka eto. Ny malaza indrindra amin'izy ireo dia ny lalan'i Bakvi, izay mamakivaky ny tempoly tranainy indrindra ao amin'ny faritra - Chonchuksa. Afaka mandeha any ianao amin'ny fitateram - bahoaka .
Maldives - isaky ny volana
Fomban-drazana ara-kolotsaina ao Singapore
Inona no hitondrana ny Maldives?
Monoblocks - ahoana no safidy?
Ny antsy ho an'ny Papa: lehilahy 9 taona izay natory niaraka tamin'ny mpitaiza ny zanany!
Vehivavy ugg boots
Fanomezana ho an'ny ankizy 10 taona
Vaovao momba ilay tovovavy Ben Affleck: fanitsakitsaka lava be sy ny fitondrana vohoka!
Sary Scarlett Johansson
Berry mulberry - tsara sy ratsy
Gigi Hadid sy Taylor Hill dia niseho tao amin'ny lahatsarin'ny kalandrie LOVE tamin'ny sary tsy mahazatra
Azo atao ve ny mukaltin bevohoka?
Fiakanjo maoderina amin'ny lohataona 2013
Akanjo tsy misy akanjo - vahaolana tsara indrindra amin'ny fahavaratra ary tsy vitan'ny hoe!
Tratra ao anaty tranom-borona
Orinasa eo amin'ny ankilany
Tavoahangy ginger miaraka amin'ny kanelina
Sylvester Stallone nankalaza ny faha-70 taonany tamin'ny sambo iray niaraka tamin'ny vady aman-janany
Fiterahana tsy fahita firy amin'ny ambaratonga voalohany - inona no tokony hatao?
Ahoana no ahazoana mofo amin'ny multifariate?